War Deg-deg ah: Hogaanka Nabadgelyada DDSI Oo Sheegay in Maleeshiyaadkii Al-qushaash Iyo Gal-mudug Indhaha Loo Shiday - Cakaara News
War Deg-deg ah: Hogaanka Nabadgelyada DDSI Oo Sheegay in Maleeshiyaadkii Al-qushaash Iyo Gal-mudug Indhaha Loo Shiday
Jigjiga( Cakaaranews ) Sabti, 23ka April 2016. Hogaanka nabadgelyada maamulka iyo cadaalada DDSI mudane Yaasiin Cabdi Waris ayaa sheegay in maleeshiyaad isugu jiray al-qushaash iyo galmudug oo si qabiil ah uwada socday oo ay hogaaminayeen hogaaminta gal-mudug ay ciidamada sida raha ubooda ee liyuu boolisku indhaha ugu shideen cashar lama ilaawaan ahna kusiiyeen qabalaha Daac-dheer ee degmada Galaadi ee gobolka doolo kadib markii ay dhawr jeer iskudayeen inay si xoog ah calankooda ugataagaan qabalahaas iyagoo weerar gardaro cad ah maanta kusoo qaaday maleeshiyo qabalee iyo shacabkii deganaa daac-dheer oo waliba baryahanba warbaahinada kalagadisan kasheegayay inay weerar qaadi doonaan. Dhinaca kalana iskadhigayay kuwo dacwo, waan-waan iyo wada hadal kula jira xukuumada DDSI.
Weerarkan xaq-darada ah oo ahaa shirqool argagixisonimo oo ay baryahanba maleegayeen maleeshiyaadka al-qushaash iyo galmudug rabeena inay kuwaxyeeleeyaan shacabka rayidka ah ee degan qabalaha Daac-dheer ayay kufashilmeen iyagoo halkaa ay ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee liyuu boolisku talaabo sharci ah oo aysan dib danbe u hawaysanin gudaha xadka deegaanka kaga qaadeen. Tiknikadii ay wateena kugubeen islamarkaana kaga furteen goobtaas hubkii ay wateen. Shacabkii iyo deegaankii ay kusoo duuleena halkaa kaga bad-baadiyey.
Ugudanbayna, hogaanka ayaa xusay inay layaab tahay dharaar kuriyoodka maleeshiyada al-qushaash iyo galmudug ay kudamceen inay tuulooyinka ay kamid tahay daac-dheer ay kataagaan calankii al-qushaash iyagoo si dhab ah u og kana dharagsan inay tuulooyinkaasi kamid yihiin deegaanka soomaalida itoobiya.
Wixii dib kasoo kordha kala soco www.cakaaranews.com